भिडियो ब्लग: मिर्गौला, क्यान्सर र पक्षघातका बिरामीले ५ हजार भत्ता कसरी पाउँछन्? :: डा समिरकुमार अधिकारी :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
भिडियो ब्लग: मिर्गौला, क्यान्सर र पक्षघातका बिरामीले ५ हजार भत्ता कसरी पाउँछन्?
डा समिरकुमार अधिकारी शनिबार, चैत २६, २०७८, १२:०२:००
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले औषधि उपचारबापत मासिक ५ हजार पाउनेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा देशभरका ७५३ स्थानीय तहबाट उक्त रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले उक्त रकम बिरामीले आफ्नै पालिकाबाट पाउने बताएका छन्।
भत्ताका विषयमा जानकारी यो भिडियोमा हेरौं